Lalao casino vaovao an-tserasera - Iza no mila lalao casino vaovao? - Lilith Games
Lalao casino vaovao an-tserasera - Iza no mila lalao casino vaovao?
Ny vokatra sy / na serivisy atolotra isan-karazany dia iray amin'ireo fepetra lehibe hisarihana ny mpanjifa. Amin'ny sehatry ny filokana dia kilalao voalohany. Ny toerana samy hafa dia manolotra lalao isan-karazany, fa ny lehibe kosa dia poker, blackjack ary roulette. Kely ny malaza ary noho izany tsy fahita firy any amin'ny trano filalaovana dia lalao amin'ny craps sy baccarat. Misy koa ny 10 lalao manokana eto amin'izao tontolo izao. Na izany aza, mbola betsaka lavitra ny lalao ao amin'ny casino. Avy aiza izy ireo? Mipoitra izany noho ny zavatra samihafa: https://www.allnewgclub.com/
1. Fitrandrahana isan-taona eo ho eo amin'ny lalao mpanoratra vaovao 2-3 dia miseho amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena. Tany am-piandohana dia nahasarika ny mpandraharaha casino tamin'ny tsy fahaizany matetika, izay mandinika azy ireo, mamaky ireo fitsipika tsy takatra ary manandrana milalao izao. Fa ny fahalianan'izy ireo dia nanjavona tsikelikely. Raha ny tena izy dia tsy mahaliana ireo lalao ireo ary indraindray mety ho sarotra ny mahatakatra fa tsy ho an'ny mpilalao tsotra ihany fa ny solontenan'ny casino koa. Lalao maro koa dia mila fitaovana manokana. Na dia mametraka latabatra ho an'ny lalao tahaka izany ny tompona orinasa, dia ho diso fanantenana azy ireo mpanjifan'ny casino: "Ho mafy loatra, mankaleo, tsy mahaliana". Ary matetika: "Tsy misy kisendrasendra".
2. Ny famoronana amin'ny Casino Mpanao trano na mpiasa amin'ny trano filokana dia mamorona lalao mahaliana. Na izany aza, tsy manana ny ho aviny koa izy ireo noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo: "Tsy te handany vola hianarana lalao vaovao aho".
3. Ny fanavaozana, miorina amin'ny fiovan'ny lalao misy eo amin'ity tranga ity, mba hieritreretana lalao vaovao, ampy hanovana ny fitsipiky ny efa misy sahady. Koa inona no mahatonga ny trano filokana hampidirana lalao vaovao ao amin'ny casino iray? Mankaleo ve ny amboara maoderina sy blackjack ary poker ny mpilalao maoderina? Tsia mihitsy. Raha tsy misy karazana poker, izay malaza amin'izao fotoana izao noho ny fanavaozana tena mahaliana, ny lalao vaovao rehetra dia fanampiana kely amin'ny marketing ihany amin'ny fampiroboroboana ny hetsika casino. Tsy manana vokatra filalaovana izy ireo.
Users browsing this forum: FrankJScott and 5 guests